तपाईं कफी बजार मा एक लामो समय को लागि, विशेष उपकरण बिना सामान्य भान्सा मा तयार गर्न अनुमति घरेलू उपकरण। मिति, यो विशाल खण्ड को शीर्ष कि कफी को अन्न र capsular मोड काम विशेष उपकरणहरू छन्। यी मोडेल भान्सा उपकरण को सबै भन्दा ठूलो निर्माताहरु को रेखा मा छ, त्यसैले स्वाद पेय हरेक प्रशंसक आफ्नो आवश्यकता लागि एक योग्य विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एक ठूलो चयन वैकल्पिक छ, त्यसैले, मानक कार्यहरु बाहेक स्वचालित कफी घर लागि समकालीन डिजाइन मा मिसिन प्रदान उल्लेख गर्नुपर्छ, यो सुरुमा थप उपकरण क्षमताहरु भर गर्न आवश्यक छ। तर, यस्तो मोडेल अधिक महंगा छन्।
के उच्च गुणस्तरीय एस्प्रेसो मिसिन distinguishes?
राम्रो कफी मिसिन को प्रमुख सुविधाहरू एक कार्यक्षमता छ। दुर्लभ अवस्थामा मात्र, शङ्कास्पद गुणस्तर मोडेल "तीव्र बाफ" को एक प्रणाली समय को एक न्यूनतम अवधिको लागि एक कप कफी भर्न सक्नुहुन्छ जस्ता प्रविधि प्राप्त। थप बयलर को उपस्थिति, बारी मा, यो सम्भव साथ दुई फरक पेय बनाउन बनाउँछ। विशेष मा, एक स्वचालित कफी घर लागि यो embodiment मा मिसिन संयोजन गर्न एस्प्रेसो र macchiato, cappuccino र Latte, साथै अन्य विकल्प तयार गर्न सक्षम छ। मूल नुस्खा को प्रशंसक कफी प्रेमीहरूको बीचमा धेरै। यसको लागि ग्राहकहरु यो समूह भनेर व्यञ्जनहरु भण्डारण गर्दछ सफ्टवेयर मोड्युल संग लायक सिफारिस उपकरणहरू छ।
एक गुणात्मक मोडेल को अर्को साइन भएको मदिरा सिस्टम छ। यसरी, यन्त्र संरचना मा उपस्थितिको कारण जलेको माटोको Grindstones पेय स्वाद सफाया छ। तर यस्तो उपकरण मात्र अनाज स्वचालित कफी मिसिन र एस्प्रेसो जोडती केही मोडेल हो छ। र अब यसलाई विभिन्न निर्माताहरु कफी मिसिन विचार लायक छ।
फिलिप्स मोडेल को समीक्षा
घरेलू मोडेल स्वामित्वको पनि कफी मिसिन कि उपकरण थप स्पेस को तयारी आवश्यकता छैन होइन - यो एक कफी Grinder मग को आकार कार्यालय लागि समग्र प्रणाली, तर छैन। फिलिप्स देखि Saeco मोडेल श्रृंखला फारम कारक को एक किसिम सहित उपभोक्ताहरु मायाको छन्। उदाहरणका लागि, उत्पादनहरु को लाइन मा foamed दूध सक्षम कि परिमार्जनहरू फेला र संकुचित उपकरण XSmall, र multifunction प्रकार HD8751 शृंखला गर्न सकिन्छ। साथै, स्वचालित कफी मिसिन Saeco को अनाज को परम्परागत पेय तयारी सिस्टम जानबूझकर कारण सकारात्मक छाप कारण। यो प्राविधिक समाधान मात्र उच्च गुणवत्ता सुगन्ध र स्वाद, तर दानाको मोडेल को सञ्चालन तुलनामा पनि सस्ता लागत प्रदान गर्दछ।
DELONGHI मोडेल को समीक्षा
को DELONGHI ब्रान्ड कफी मिसिन को एक विशेष निर्माता गर्न विशेषता गाह्रो छ तापनि, यो उत्पादन को प्रयोगकर्ता द्वारा पुष्टि जो यो निर्देशन, मा पर्याप्त प्रगति बनाउँछ। विशेष मा, जस्तै वाहन को मालिकहरूले पेय को तयारी को प्रदर्शन र गति चिनो। सबैभन्दा उन्नत प्रौद्योगिकी मिसिन एक Latte तयार वा एक मिनेट मा इस्प्रेस्सो। साथै, कुलीन वर्ग को बजार capsular मोडेल मा स्वचालित कफी मिसिन DELONGHI। यो संशोधन Lattissima Plus4 र Caffitaly, समीक्षा पकाउने मापदण्डहरू भण्डारण गर्न प्रयोग उपकरणहरू को सजिलो जोड जो, साथै परिणामस्वरूप पेय को स्वाद विशेषताहरु लायकको।
बश मोडेल को समीक्षा
जर्मन बश विकासकर्ताहरूले पनि प्राविधिक बजार मा उनको सफलता सुनिश्चित जो, कफी मिसिन को विकास मा ध्यान केंद्रित गर्दै छन्। जो अत्यधिक प्रयोगकर्ताहरू द्वारा दर्जा दिइएको हो नवीनतम घटनाहरु, बीच, एक मदिरा सिस्टम अरोमा चक्कर प्रदान गर्न छ। यो प्रविधिको प्रभाव जो समयमा त्यहाँ गीला छ धेरै चरणमा, granules को वितरण, हटाउने extractives र गतिशील पकाउने प्रक्रिया अन्तर्गत सबै यो पनि समावेश छ। फलस्वरूप, स्वचालित कफी मिसिन बश यस्तो प्रणाली संग धेरै स्वादिष्ट कफी, पनि पेय प्रेमीहरूलाई माग मूल्यवान छ जो तयार छ। तर यस उपकरणहरू मात्र घरेलू कफी को intricacies मा पेशेवरों र विशेषज्ञहरु प्रयोगको लागि डिजाइन गर्दै छन् मतलब छैन। मालिकको यी मिसिन को आफूलाई अनुसार, नियन्त्रण बटनहरू संग प्राथमिक manipulations द्वारा एक सहज इन्टरफेस संग बुझे हुन्छ।
Jura मोडेल को समीक्षा
Jura फोन समूह को उच्च खण्ड गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। यो ब्रान्ड बाहिर स्वचालित कफी मिसिन, अन्तर्गत प्रतिक्रिया यसको उत्कृष्ट डिजाइन, विधानसभा, विश्वसनीयता र Ergonomic लाभ को जो सूचना मा। साथै, Jura मोडेल व्यक्तिगत पकाउने मापदण्डहरू भण्डारण गर्न छ।
निर्माता को सबै भन्दा लोकप्रिय वाहन बीचमा धेरै को तयारी को एक समारोह प्रदान गर्दै प्रतिनिधिहरु जो Impressa, एक श्रृंखला ध्यान दिनुहोस् आवश्यक छ कफी को प्रकार र तातो चकलेट। उल्लेखनीय ena संस्करण, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले कैफीन बिना पेय तयार। एकै समयमा, स्वचालित कफी मिसिन Jura फरक र प्रयोग सजिलो। मालिकको, उदाहरणका लागि, यन्त्र सामग्री मा समस्या समाप्त कि आत्म-सफाई समारोह प्रशंसा गरे।
सबै भन्दा राम्रो मोडेल कसरी चयन गर्ने?
एस्प्रेसो मिसिन निर्माता को एक cursory समीक्षा लाग्न सक्छ कि आफ्नो प्रस्ताव द्वारा र एउटै ठूलो छ। उदाहरणका लागि, बश कसले भन्यो धन्यवाद मोडेल उच्च विश्वसनीयता र व्यापक कार्यक्षमता द्वारा विशेषता छन् नयाँ प्रविधिहरू, Jura को परिचय मा केंद्रित छ, तर तपाईं एक बहुमुखी प्रविधी आवश्यक छ भने, तपाईं फिलिप्स ब्रान्ड सम्पर्क गर्नुपर्छ - तर यो हरेक ब्रान्ड यसको अद्वितीय फाइदा को लागि उपभोक्ताहरु चकित कोसिस देखि, मामला छैन। स्वचालित कफी मिसिन पनि आवश्यकताहरु प्रदर्शन सामना गर्नुपर्छ। उच्च गति पकाउने, प्रयोगकर्ता अनुसार कम्पनी DELONGHI लागि प्राथमिकता हो।
एक स्वादिष्ट कफी खाना पकाउने लामो विशेष संस्थाहरु को अवसर भएनन् छ। कुनै पनि गृहिणी केही मिनेटमा यो कार्य सामना गर्न सक्नुहुन्छ। स्वचालित एस्प्रेसो मिसिन प्रयोग गर्न सजिलो सजिलो गर्म चकलेट सहित छैन विभिन्न पेय पदार्थ, एक उच्च परिष्कृत व्यञ्जनहरु तयार बनाउँछ। तर Ergonomics अनुभवहीन प्रयोगकर्ताहरूको लागि बरु महत्त्वपूर्ण छ, र परिष्कृत कफी पीने खाना पकाउन र कार्यात्मक क्षमता प्रविधी को subtleties ध्यान छन्। यस सन्दर्भमा, उपकरणहरू विकासकर्ताहरूले पनि सक्रिय, जो एक अद्वितीय स्वाद गुण संग कफी गर्न अनुमति दिन्छ बढी उन्नत प्राविधिक भराई, संग मोडेल उत्पादन बढुवा।
देश शैली भान्सा डिजाइन: पुरानो गाउँ को न्यानोपन र सान्त्वना
किन पप र फ्रिज क्लिक?
ग्यास चुलो4बर्नर: सबै भन्दा राम्रो मोडेल र आफ्नो तुलना समीक्षा
भाँडा बाट कफी दाग हटाउन सबै भन्दा राम्रो तरिका: यो सरल राख्न
बैजनी oxalis, वा oksalis
फिल्म "कार बाहिर।" अभिनेता र भूमिकाको
सबैभन्दा महंगा रूसी सिक्का को लागत। दुर्लभ सिक्के - फोटो